Hetsika Vatsy tsinjo - Ministère des Affaires Etrangères
Taorian’ny toromarika nomen’ny Filohan’ny Repôblikan’i Madagasikara, Andriamatoa Andry RAJOELINA, dia nifanolo-tanana avy hatrany tamin’ireo Fokontany maro manerana ny Renivohitra ny Minisitera rehetra amin’ny fizarana ny VATSY TSINJO, izay fanampiana avy amin’ny Fitondram-panjakana hoenti-mizaka ny filan’ny isan-tokantrano amin’ny fiainana andavanandro. Laharam-pahamehana mantsy ny sôsialim-bahoaka amin’izao vaninandro sarotra lalovan’ny vahoaka malagasy, noho ny hamehana ara-pahasalamana izao.
Ho an’ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny manokana, izay tarihin’Andriamatoa TEHINDRAZANARIVELO Djacoba S. A. Oliva, dia miara-miasa andro aman’alina amin’ireo Lehiben’ny Fokontanin’ ny Faritra Ampefiloha, sy 67Ha, ary Andohatapenaka. Faritra azo sokajiana ho be mponina indrindra eto Antananarivo ireo voalaza ireo, noho izany dia fanamby lehibe ny tsy maintsy hisitrahan’izy ireo izany fanampiana izany.
Ho an’ny androany talata 15 septambra 2020, dia tokantrano miisa dimanjato sy arivo (1500), avy ao Andohatapenaka I indray no misitraka ny VATSY TSINJO, etsy amin’ny tokontany malalaky ny Académie Nationale des Sports (ANS) Ampefiloha.
Mitohy hatrany ny fampitoviana ireo lisitr’ireo mponina voasoratra anarana isam-pokontany, sy ny lisitr’ireo voaray isaky ny Minisitera. Araka izany, dia afaka misitraka avy hatrany ny fanampiana ireo tokantrano voasoratra sy voamarina ao anaty lisitra.
Araho an-tsary àry, ny fampitoviana ireo lisitra miaraka amin’ireo Lehiben’ny Fokontany, sy ny fizotry ny fizarana etsy amin’ny ANS Ampefiloha.